एभिन्युज टेलिभिजनसंसद्को गाडीले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक घाइते - एभिन्युज टेलिभिजन
एनआईसी एशियाले कमायो करिब ३ अर्ब
गृहयुद्धमा बेपत्ता भएकाहरुको मृत्यु भइसक्यो : श्रीलंकाली राष्ट्रपति
घुम्न आएका ८ पर्यटकको ग्यास हिटरले लियो ज्यान (भिडियोसहित)
देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुनुमा बैंकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण : अर्थमन्त्री खतिवडा
पानारोमा रिसोर्टमा अचेत अवस्थामा भेटिएका आठै जना पर्यटकको मृत्यु
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन
उखु किसानलाई दिइएको भाका आज सकिँदै, अझै पाएनन् पूरै भुक्तानी
23 Mangshir 2076 Monday 1:36 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : सिंहदरबार पश्चिम मूल ढोकाअघि आज संसद्को सवारी साधनसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालक गम्भीर घाइते भएका छन् । बिहान सवा ११ बजे गलत दिशाबाट आइरहेको सरकारी नं. प्लेटको सवारीले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार यात्रु महोत्तरीका २२ वर्षीय सलन बरालको दुवै गोडामा गम्भीर चोट लागेको ट्राफिक प्रहरी प्रभाग सिंहदरबारले जनाएको छ । घाइते बरालको काठमाडौँ मोडेल अस्पताल प्रदर्शनीमार्गमा उपचार भइरहेको प्रभागका प्रहरी जवान आचार्यले जानकारी दिए ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश ३–०२, ००२ प, ९८७० नं. को मोटरसाइकललाई पुतलीसडक तिरबाट आएको सङ्घीय संसद् सचिवालयको सरकारी नं. प्लेटको प्रदेश ३–०१, ००२ झ, ४८७९ नं. स्कार्पियो गाडीले ठक्कर दिएको थियो । सो गाडी संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले चढ्ने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग सिंहदरबारका प्रहरी जवान हेमन्त आचार्यले जानकारी दिए ।
गलत दिशाबाट आएको सरकारी गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमुनि खटिनुभएकी ट्राफिक प्रहरी खीना सुवेदीले बताए । हतारमा भएर बत्ती बालेर सवारी आएको उनले सुनाए । लेन अनुशासन पालना नगरेमा ५०० देखि एक हजार ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना लेखिएको बोर्डलाई देब्रे पारेर सरकारी गाडी गलत दिशाबाट आइरहेको थियो । गाडीको अगाडितिर सिसामा सङ्घीय संसद् सचिवालय लेखिएको कागजको पास राखिएको थियो ।
सरकारी गाडीका चालक लेखमान शाक्यले नै उपचार गराइरहेको उनले बताए । संसद् सचिवालयकै गाडी भए पनि कानूनअनुसार नै कारबाही गरिने प्रभागका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।
संवेदनशील स्थानमा समेत सरकारी गाडीले गलत दिशाबाट आएर ठक्कर दिनु सामान्य घटना नभएको पैदल यात्रु राघवेन्द्र बजगाईँले बताए । छानबिन गरी यसका दोषीलाई कानुनी कारबाही नगरे सडकमा पैदल यात्रु एवं अन्य चालक पनि सुरक्षित नहुने उनको भनाइ छ । प्रत्यक्षरूपमा घटना देख्नुभएका बजगाईँ सरकारी गाडीका चालकको लापरवाहीले यस्तो भएको बताउँछन् ।
धनुषा : धनुषाका १३ स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरिएको छ । स्थानीय तहले राजश्व नबुझाएको, समयमा लेखापरीक्षण र परिषद् नगरी ...
धादिङमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु
स्कुलको देखाउने तामझाम बढि कि बिधार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तर ?
8 Magh 2076 Wednesday 8:09 am
अमेरिकाको भर्जिनियास्थित रिचमन्ड शहरमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरे
7 Magh 2076 Tuesday 9:46 pm
7 Magh 2076 Tuesday 9:03 pm
आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको भूमरीमा फस्दै नेकपा (भिडियो रिर्पोट )
7 Magh 2076 Tuesday 8:05 pm
चुरे दोहनकै कारण बस्ती र प्राकृतिक स्रोत संकटमा !
7 Magh 2076 Tuesday 7:36 pm